अब गुड्ने हैन उड्ने ट्याक्सी ! « Pana Khabar
अब गुड्ने हैन उड्ने ट्याक्सी !
प्रकाशित मिति : Apr 20, 2018
समय : 2:20 pm
विज्ञान तथा प्रविधिको उन्नत विकासले मानव समाजको भविष्यबारे यकिन गर्न गाह्रो छ । यसको विकासले मानिसहरूको सपनालाई विपनामा बदलिँदै आएको छ । भलै विज्ञानको मानवतासम्बन्धी उद्देश्यलाई बिर्सेर विज्ञान तथा प्रविधिको उन्नत विकासले मानव समाजलाई ध्वंस पार्ने भविष्यवाणी गर्ने बेलायतका विश्वप्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टिफन हकिङको देहवसान भएपनि तिनका अनुयायीहरू निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छन् ।
कृत्रिम बौद्धिकता (आटिफिसियल इन्टेलिजेन्स–एआई)को विकासले संसारलाई फेर्न लागेको हो । मानिसलाई उनीहरूले गर्नुपर्ने कामलाई सहज बनाउन निर्माण गरिने रोबोटले दुनियाँ फेर्न लागेको हो । मेसिन र मोटरको विकासले मानिसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुराउन गुडने वाहनको विकास भयो । यो वाहनले भाडामा गाडी गुडाउन थालेदेखि यसलाई ट्याक्सी सेवा भनेर बुझिएको हो । मानिसले गुडने वाहन होइन उडने वाहन पनि बनायो । हवाई जहाजको माध्यमबाट मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा उडेर जाने सुविधा प्राप्त गर्यो । तर हवाइ जहाजलाई जताततै ओराल्न गाह्रो भएपछि हेलिकप्टरको विकास गरियो । तर यसले पनि आम मानिसलाई सहज सुविधा पुराउन सकेन ।
यसै विकास क्रममा गुडने ट्याक्सीको ठाउँमा उड्ने ट्याक्सीको विकास भोलोकप्टरले गरेको छ । यसले आगामी १० वर्ष पछि यो सेवाको विस्तार गर्ने गरी उड्ने ट्याक्सीका लागि स्टेसनहरूको विकास गर्न लागेको लगाएको छ । सन् २०२८ सम्म भोलोकप्टरको फ्लाइङ टयाक्सी (उडने टयाक्सीले दैनिक १० हजार यात्रुको ओसार पसार गर्ने गरी सेवा उपलब्ध गराउँछ । जर्मनको भोलोकप्टरले यो उड्ने ट्याक्सी सेवाको तयारीका क्रममा यसको प्रदर्शन गरेको छ । यो सेवाका लागि सहरका बहुतला भवनहरूको छानामा ट्याक्सी स्टेसनको रूपमा भोलो पोर्टको निर्माण गरिनेछ ।
कम्पनीका अनुसार उडने टयाक्सीको रूपमा प्रयोग हुने विमान पूर्णरूपमा तयार हुनेछन् । सामान्य मानिसका लागि यात्र गर्न सकिने गरी यसका अवतरण र उडान स्थलहरूको निर्माण गरिन्छ । सहर भर यो सेवा विस्ता गर्न दस वर्षजति लाग्ने कम्पनीले जनाएको छ ।भोलोकप्टरका संस्थापक एलेग्जन्डर जोसलले भने “यो उडान सेवाबाट मानिसलाई टयाक्सी सेवा सुरक्षित तवरले गराउने आफूहरूको उद्देश्य छ ।” घन्टामा १ हजार यात्रुलाई यो सेवा दिन सक्ने उनले जनाए ।
सुरूमा यो सेवा बढीमा २७ किलोमिटरको क्षेत्रमा र ३० मिनेटको समयमा उडान गर्न सकिने उपलब्ध हुनेछ । कम्पनीले यसको सेवा जर्मनी र दुबईमा पहिले गर्ने योजना बनाएको छ । हालै मात्रै यो कम्पनीले इन्टेलसँग साझेदारी गर्ने घोषणा गरेको छ । लास भेगाको सीइएसमा आयोजित एक कार्यक्रममा यो घोषणा गरिएको थियो । जनवरीमा सम्पन्न यो कार्यक्रममा भोलोकप्टरले आफ्नो सुपर ड्रोन्सको प्रदर्शनी गर्यो । प्रदर्शनीको क्रममा भोलोकप्टरको यो विमानलाई विश्वको पहिलो स्वचालित उडने ट्याक्सी भनिएको थियो । यसअघि हालै मात्र दुबईमा यसले मानवरहित उडान परीक्षण गरेको थियो । यो उडान प्रदर्शनी पछि मानिसहरूले यसलाई ट्याक्सी सेवाको रूपमा फोनको माध्यमबाट बोलाउन र यसको उपयोग गर्न पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
मानिसले फोन गरी यो उडने ट्याक्सीलाई बोलाए पछि टयाक्सीले तपाई कहाँ जाने भन्नेछ र तपाईको जवाफ अनुसार उडाएर गन्तव्यसम्म पुराउने सेवा उपलब्ध गराउँछ । यसका लागि चालकको आवश्यकता हुँदैन् । यो आफै उडाएर लान्छ र भनेको स्थानमा पुराउँछ । यो सुरक्षित र भरपर्दो उडने ट्याक्सी सेवा उपलब्ध गराउँछ ।
स्वचालित यो फ्लाइङ ट्याक्सी विद्युती ऊर्जाबाट उड्नेछ । यसमा प्रयोग हुने ऊर्जाबाट वातावरणलाई प्रदुषित पार्ने खालका ग्यास उत्र्सजन हुँदैन् । वातावरण संरक्षणका लागि यो सेवा राम्रो हुने अपेक्षा गरिएको छ । कम्पनीले सहरी क्षेत्रमा वातावरण संरक्षण नीति अनुकूल राम्रो सेवा यात्रुलाई उपलब्ध हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । हलिउड मुवीको काल्पनिक कथा जस्तो लाग्ने यो आविश्कार उपभोक्तासम्म आइपुग्न भने समय लाग्नेछ । तर प्रविधि क्षेत्रमा भने यसको बहस सुरु भइसकेको छ । धर्मेन्द्र कर्णले लेखेका यो खबर कारोबार दैनिकबाट लिइएको।
प्रकाशित मिति : २०७५ बैशाख ७,शुक्रबार
५ करोड फेसबुक एकाउन्ट ह्याक हुन सक्ने खतरा
मोबाइलको स्क्रिनमा ट्वाइलेट सिट बराबरकै किटाणु
१६ वर्षे अस्ट्रेलियाली स्कुले छात्रले एप्पलको सिस्टम “ह्याक” गरेको खुलासा
लोकप्रिय लुडो खेलको एप बनाउने नेपाली युवाहरु
विश्वको कुनै पनि कुनामा ४ घन्टामै पुग्ने विमान
फेसबुक र मार्क जुकरवर्ग बारे रोचक तथ्यहरु